नेपालमा बनेको टपरी अमेरिकी बजारमा जमाउँदै - IAUA
नेपालमा बनेको टपरी अमेरिकी बजारमा जमाउँदै
ramkrishna June 15, 2017	tapari
नेपालमा खासै महत्व नपाएको सालको पातबाट बन्ने टपरीले अमेरिकामा भने बजार तताईरहेको छ । वातावरण प्रदुषणमा कमी ल्याउन अमेरिकामा यसको प्रयोग बढिरहेको छ ।
प्लास्टिक र कागजका उत्पादनलाई बिस्थापित गर्दै नेपालको टपरीले अमेरिकाको बजारमा कब्जा जमाउन थालेको छ । लिफप्लेट्स इनिसियटिभ्सको अगुवाई गरिरहेका प्रकाश बजगाईसँगको कुराकानी :
हिजोआज के मा ब्यस्त हुनुहुन्छ ?
हाल म आफ्नै न्युटनको थ्योरीमा काम गर्दैछु । अमेरिकाको न्युयोर्क इन्सिट्च्युट अफ टेक्नोलोजीमा मेकानिकल इन्जिनियरिङ विषय अध्ययनरत पनि छु । नासासँग मिलेर त्यो काम अघि बढिरहेको छ । त्यससँगै लिफप्लेट्स इनिसियटिभ्स र लिफप्लेट्स कम्पनि चलाईरहेको छु ।
कसरी यो काम अघि बढाईरहनु भएको छ ?
क्लिन्टन फाउन्डेसन र क्लाइमेट रियालिटी प्रोजेक्टसँग मिलेर यो काम अघि बढिरहेको छ ।
यि संस्थाहरुले कस्तो कामलाई प्राथमिकता दिन्छन् ?
नयाँ सोच, विचार र संसारलाई प्रभाब पार्ने कामलाई सहयोग गर्छन् । हाम्रो कम्पनिलाई फाउन्डेसनले मद्दत गरिरहेको छ । सन् २०१६ अप्रिलमा प्रोजेक्ट पास भयो ।
त्यसैगरी २०१६ को अन्तिममा अमेरिकाका उपराष्ट्रपतिको क्लाइमेट रियालिटी प्रोजेक्टमा लिडर हुने मौका पाईयो । यस प्रोजेक्टले जलवायु परिवर्तनसँग काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई बोलाउने गर्छन् ।
लिफप्लेट्स इन्नोभेसन कस्तो कम्पनि हो ?
यो मेरो अध्यक्षतामा खडा भएको प्रोजेक्ट हो । हामीले यस मार्फत नेपालमा चल्दै आएको टपरीलाई ब्यबस्थित रुपमा बनाएर न्युयोर्कमा बेच्ने गर्छौं ।
कसरी यस्तो सोच आयो ?
संसारमा पछिल्लो समय वातावरण एकदमै प्रदुषित भएको छ । र, यो प्रदुषण फैलाउनमा प्लास्टिक, कागजका सामानहरुको भूमिका छ । यिनिहरुले बिशेष प्रदुषण निकाल्छन् ।
त्यसलाई हटाएर स्वच्छ वातावरण कायम राख्नमा थोरै टेवा दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो अबधारणा हो । स्वच्छ, शत प्रतिशत पुन प्रयोग गर्न सकिने, नेपालमै उत्पादन भएको सामानलाई हामीले अमेरिकामा बिक्रि गर्छौं ।
सबै उत्पादन नेपालबाटै निर्यात हुन्छ ?
केही मात्रामा नेपाल र केही मात्रामा भारतबाट जान्छ ।
यसको कारोबार कस्तो चलिरहेको छ ?
हामीले सूरु गरेको अहिले ५ महिना भयो । यतिबेला हामीले २ वटा रेस्टुराँ, २० वटा ठेलागाढा, ३३ वटा विश्वविद्यालय र न्युयोर्कमा हुने महोत्सबमा आफ्नो उत्पादन बिक्रि गर्दै आएका छौं ।
सूरुवातको महिनामा ५ लाख रुपैंयाँ बराबरको कारोबार भयो । अहिले ३५ देखी ४० लाख रुपैंयाँ बराबरको कारोबार भईरहेको छ ।
कस्तो छ यसको बजार ?
एकदमै राम्रो छ । गर्न सक्ने हो भने अझैं यसलाई बिस्तार गर्न सकिन्छ । हाल न्युयोर्कमा ८.१ बिलियन डलर बराबरका प्लास्टिक बेचिन्छन् । हामीले त्यसलाई बिस्थापित गरेर बजार लिन सक्छौं ।
यहाँको उत्पादन अमेरिका सम्म पुग्न कति समय लाग्छ ? कठिनाईहरु के–के छन् ?
नेपालको उत्पादन पुग्न ४५ दिन र भारतबाट ३२ दिनमै पुग्छ । माग अनुसार आपूर्ति गर्न सकिरहेका छैनौं । भारतबाट ८० हजार देखी १ लाख सम्म प्लेट निर्यात भईरहको छ ।
नेपालबाट झण्डै २५ हजारको संख्यामा जान्छ । ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्ने योजना छ । त्यसका लागी हेटौंडा र काठमाडौंमा उद्योग नै खोल्ने योजना छ ।
कस्तो छ अमेरिकाको जीवन ?
जीन्दगी दुखै रैछ । म पूर्णकालिन विद्यार्थी पनि हो । संघर्षरत छु । काम र पढाईलाई सँगै अगाडी बढाईरहेको छु ।
Previous Previous post: चनाचटपटे र पानी पुरी नखान चिकित्सकको सल्लाह
Next Next post: कति सुरक्षित छ तपार्इंको कम्प्युटर ? यसरी बचाउनुस् कम्प्युटर र डाटा